Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay laamaha ammaanka – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay laamaha ammaanka
Fariinta Wacyigelinta Bulshada ee COVID19
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay laamaha ammaanka, sida Guddoomiyeyaasha degmooyinka, Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida Gobolka Banaadir.
Kulankan ayaa warbixin loogaga dhageystay Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Booliska, waxaana la isku weydaarsaday in wada shaqeyn dhow dhex marto laamaha amniga Gobolka iyo shacabka, si loo adkeeyo ammaanka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo shir guddoominayay kulanka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay in laga shaqeeyo amniga iyo nadaafada.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Jen, Cali Xirsi Barre ayaa sheegay in wada shaqeyn la yeelan doonaan Guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo waaxyaha kala duwan ee gobolka.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa amray inaan meelaha qaar ee magaalada lagu arki karin qashin, isla markana waxaa uu ku amray in ka shaqeynta nadaafada iyo amniga la xoojiyo.
Wiil Somali ah oo dalka Mareykanka ku galay qaab Qaxootinimo ah ayaa lala xiriirinayaa in uu xiriir dhaw la lahaa nin iyo Xaaskiisa oo dhawaan weerar ka geystay Gobolka California
Maxamed Aadan Ibraahim ‘(Fargeeti) ayaa tababar u furay shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda
Abdi Risaq Afrika
Soo laba kacleynta Caabuqa Covid19 waxaa keliya looga hortegi karaa ayaa ah in la sii xoojiyo wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka Caabuqa Covid19. Wasaarada Caafimaadka ee Dowlad Goboleedka Jubaland ayaa ku hawlan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa isla markaana loo fahansiin lahaa muhiimada talaalka.
Wasaarada oo kaashaneysa hey’ada Secours Islamique France ( SIF) aya Deegaanada jubaland ka bilowday wacyigelinta bulshada iyadoo adeegsaneysa warbaahinta STAR ee STAR FM iyo STN TV.
Halkaan hoose ka dhageyso fariinta wacyigelinta bulshada ee wasaarada Caafimaadka jubaland.
Barnaamijyada3 weeks ago
Barnaamijyada9 months ago
Ciyaaraha6 months ago